PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: *** အဖေ ဘင်္ဂလီ အမေ ဘင်္ဂလီ သားသမီး ရိုဟင်ဂျာဆိုပဲ*** ??????
*** အဖေ ဘင်္ဂလီ အမေ ဘင်္ဂလီ သားသမီး ရိုဟင်ဂျာဆိုပဲ*** ??????
ဒီနေရာမှာတော့ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေး ရဲ့ စကားကို ပြတ်ပြတ်သားသား ထောက်ခံပါတယ်။အမေရိကန်မှာလဲ မက္ကဆီကန်တွေ ခိုးဝင်တာ မိရင် ဥပဒေအရ အရေးယူတာပဲ။
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာများကို နိုင်ငံသား တဦးကဲ့သို့ အခြေခံ လူ့အခွင့် အရေးများ ပေးအပ်သင့်သည် ဆိုသော ပြောဆိုမှုနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာဆိုသော အသုံးအနှုန်း ကို မြန်မာအစိုးရက လက်မခံကြောင်း နယ်စပ်ရေးရာ လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး က ပြောဆို လိုက်သည်။
“ရိုဟင်ဂျာ အဖြစ် စာရင်းသွင်းဖို့ တောင်းဆိုတာက တထောင်မှာ တရာလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လ၀ကက စစ်လိုက်တော့ အဖေကလည်း ဘင်္ဂါလီ၊ အမေကလည်း ဘင်္ဂါလီ၊ သားသမီးကျမှ ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်ချင်တာက ဆန္ဒစွဲတွေ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေးက ဆိုသည်။
မြန်မာစကား၊ ရခိုင်စကား မတတ်တဲ့ စိမ့်ဝင် ဘင်္ဂလီတွေက ဒီမှာမွေးတယ် ပြောရုံနဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသား မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ ကမန်လို့လဲ မပြောနဲ့။ ရခိုင်ပြည်နယ် တခုလုံးမှာ နိုင်ငံသားနဲ့ နိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့ ဘင်္ဂလီတွေ ခွဲထုတ်ပြီး စိမ့်ဝင် ကျူးကျော် ဘင်္ဂလီတွေကို နယ်စပ်မှာ (သြစီမှာ လုပ်သလို ကျွန်းတ ကျွန်းပေါ် မှာ ဖြစ်ဖြစ်) ဒုက္ခသည်စခန်း ဖွင်ပြီး လက်ခံနိုင်တဲ့ တတိယ နိုင်ငံတွေကို ပိုသင့်ပါသည်။
ပြည်တွင်းက မြန်မာ မွတ်စလင်တွေကလည်း ဘင်္ဂလီစိမ့်ဝင်မှု တားဆီးရေးကို ဘာသာရေးကြာင့် နှိပ်ကွပ်တယ်လို့ မမြင်သင့်ဘူး။ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်းရှိ မြန်မာမွတ်စလင်များက တဖက် နိုင်ငံမှ စိမ့်ဝင် လာသော နိုင်ငံခြားသား ဘင်္ဂလီများကို ပြစ်တင် ရှုံ့ချခြင်းဖြင့် ပြည်ချစ်စ်ိတ် ဓာတ်ကို ဖော်ပြသင့်ပါသည်။ ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများမှာ သိသာစွာ ကွဲပြားပါ သည်။ မြန်မာ မွတ်စလင်နှင့် တဖက်နိုင်ငံမှ ၀င်လာသူ ဘင်္ဂလီ များကိုလည်း လွယ်ကူစွာ ခွဲခြားနိုင် ပါသည်။
နယ်စပ်တိုင်းမှာ နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှု တားဆီးရေး ဘယ်စီမံချက်မှ အောင်မြင်တာ ၁၀၀% မရှိဘူး။ India မှာလည်း ခိုးဝင် ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည် ၁သန်းလောက်ရှိပြီး သူတို့ကို နိုင်ငံသား မပေးဘူး။ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ မွေးချင်တိုင်း မွေးနေတဲ့ ကလေးတွေကို လည်း နိုင်ငံသား မပေးဘူး။ အမေရိကန်မှာလဲ မက္ကဆီကန်တွေ ခိုးဝင်တာ မိရင် ဥပဒေအရ အရေးယူတာပဲ။ ဘင်္ဂလီကတော့ နယ်စပ်ချင်း မကပ်တဲ့ သြစီ (Australia) ကိုတောင် လှေနဲ့ ခိုးဝင်ဘို့ ကြိုးစားလို့ ကျွန်းတွေမှာ ပို့ထားတယ်။ မြန်မာတွေလည်း တခြားနိုင်ငံတွေ တရားမ၀င် သွားအလုပ်လုပ်ရလို့ အဲဒီ့အိမ်ရှင် နိုင်ငံသား ခံယူခွင့်ပြုဘို့ ဘယ်သူမှ မတောင်းဆိုဘူး။ တောင်းဆိုသူ ကိုလဲ မြန်မာနိုင်ငံသားမို့ ဗုဒ္မဘာသာ ချင်းမို့ဆိုပြီး ဘယ်သူကမှ ထောက်ခံ မပေးဘူး။ မရလို့ မတရားဘူး လို့လဲမပြောဘူး။
အိမ်ရှင်နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအရ ခွင်ပြုလို့ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရတာ၊ မရတာ သူနိုင်ငံ သူ့ဥပဒေအရ သူ့သဘောပဲ။ တည်ဆဲ ဥပဒေနဲ့ ဘောင်ဝင်ရင် နိုင်ငံသား ပြုခွင့်ရ ကြ တယ်။ ဘောင်မ၀င်ရင် မရဘူး။ အိမ်ရှင် နိုင်ငံတွေ ကလည်း ဥပဒေခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ အကန်အသတ်မဲ့ လက်ခံတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံမှ တည်ဆဲ ဥပဒေခွင်ပြုချက် မရှိပဲ နိုင်ငံခြားသားကို အကန်အသတ်မဲ့ လက်ခံတာ မရှိဘူး။ တရားမ၀င် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းသူတွေကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ အိမ်ရှင် နိုင်ငံက ပြန်ပို့ လိုက်ရင် မြန်မာပြည်မှာ ပြန်လက်ခံ ရတယ်။ တရားဝင် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ရှိလို့ မြန်မာ နိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီး။
Basic principal of Ethic က Rules of Law ပဲ။ ကိုယ်လိုရာဆွဲပြီး အခွင့်အရေး စကားပြော၊ အခွင့်အရေးယူချင်လို့ မရဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ပြောတာ လက်တွေ့ စမ်းလို့ရတယ်။ မြန်မာပြည်က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တယောက် မွတ်စလင်နိုင်ငံတခုကို တရားမ၀င် သွားပြီး နိုင်ငံသားခံခွင့် ကြိုးစားကြည့်လိုက်။ တရာမ၀င်ကလေး တယောက်ယူပြီး သူ့နိုင်ငံသား ဖြစ်မလား ကြိုးစားကြည့်။ သူ့ နိုင်ငံသားခံခွင့် မရနိုင်ဘူး။ ဒီတော့ မြန်မာပြည်မှာ လက်ရှိ ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသူ နဲ့ နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့သူ ခွဲခြားစီရင်တာ Ethic အရ မှန်တယ်။ ဥပဒေအရ စီရင်ခြင်းထက် ပိုပြီး အခွင့်အရေး လိုချင်လို့ မရမှန်း သိရက်နဲ့ မသိချင်ရောင်ဆာင် ဥပဒေဘောင်ကျော်ပြီး ဥပဒေမဲ့ စိမ့်ဝင်ကျူးကျော်သူ ဘင်္ဂလီ တွေအတွက် ဘာသာရေး အခြေခံစိတ်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး စကားပြောပေးနေတာက မျိုးမစစ်လို့ ပြည်ချစ်စိတ် မရှိတာပဲ။
From:[_ U Aung Hlaing U_]
Posted by PNSjapan at 8:01 PM